Urea Crea UA - Renal FunctionⅠ Inokurumidza Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
Urea Crea UA - Renal RinoshandaⅠ Inokurumidza Reagent Kit
[email inodzivirirwa] Iyo Urea / Creatinine / Uric Acid Reagent Kit inoitirwa kuti uongorore urea, creatinine (Crea) uye uric acid (UA) muvanhu serum. Kiriniki, inonyanya kushandiswa kuongorora renal basa.
Urea ndiko kuguma kwechigadzirwa chekupenga kwemapuroteni mumuviri wemunhu. Iyo inogadzirwa muchiropa uye inoburitswa zvakanyanya mushure mekupfuura kune itsvo. Chiyero cheUrea mu serum chiratidzo chakakosha chekiriniki kuongororwa kweye renal basa.
Creatinine ndicho chakasarudzika chigadzirwa chemusiki inogadziriswa mumhasuru, uye chinojekeswa kubva mumuviri neitsvo. Iwo akakwira mwero yeropa creatinine kazhinji inyevero yekusashanda kana kukundikana kweitsvo. Ropa creatinine chiratidzo chakaringana chinoratidza kukanganisa kweitsvo chaiko, kuwanda kwe creatinine muropa nokudaro chiratidzo chakakosha mukuwongorora renal function.
UA ndicho chigadzirwa chekupedzisira chekuparara kwemetabolism, uye inosvinwa kunze kwemuviri wemunhu kuburikidza neitsvo uye neweti. Iyo yakakwira uric acid nhanho inowanzoonekwa mune gout varwere. Kune varwere vane yakawedzera nucleosides metabolic, senge leukemia, yakawanda myeloma, polycythemia vera; hosha dzeitsvo dzakadai seacute / chisingaperi nephritis, itsvo ibwe, nezvimwewo, uric acid mwero muropa wakanyanya kukwirira.
Liquid phase reaction system, uchishandisa enzymatic methodology inotungamira kune chaiyo mhedzisiro
iPOCT system yakanyanyisa kukodzera kune yega bvunzo uye zvechokwadi pane-kudiwa
Mhedzisiro inowanikwa mune 10 maminetsi
Yakagara-izere & imwechete-yekushandisa katuriji